Dịrị | December 2021
Kedu ihe ị ga - enweta mgbe ị gafere Bichon Frize na Poodle? A ụmụaka egwuregwu nkịta ngwakọ! Nke a bụ ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere Fluffy Bichon Poodle mix.
Onye Ọzụzụ Atụrụ Black German: Nduzi nke Nkịta Na-adịghị Ahụ
Enwere ihe ndị ọzọ nye Onye Ọzụzụ Atụrụ Black German karịa mma ya - nnukwu nkịta na-arụ ọrụ na anụ ụlọ ezinụlọ. Gụọ na-amụtakwu banyere ihe a dị ịtụnanya canine.
Black Golden Retrievers: Ihe I Kwesịrị Knowmara
Enweela mgbe ọ bụla onye na-agba ọla edo ojii na-eche etu ụwa ọla edo nwere ike isi bụrụ oji? Eziokwu bụ, ha enweghị ike. Ọ bụrụ na ị hụrụ Ọlaedo nke dị oji niile, ọ ga-abụrịrị ụdị ọzọ dị ka Flat-Coated Retriever. Mana nke ahụ apụtaghị na ndị agbapụta ọla edo enweghị ike ịnwe akara ojii. Ihe niile na-agbadata na nke ha ... G moreKWUO
Black Mouth Cur bụ nkịta na-achụ nta na-echekwa yana anụ ụlọ ezinụlọ na-egwuri egwu. Guo ka ịmụtakwu banyere ụdị ike a.
Blacklọ nyocha ojii ka ndị dinta kacha mma?
A na-ejikarị Lablọ ojii ojii eme ihe dị ka nkịta egwuregwu ma bụrụ nke a ma ama na obodo ịchụ nta, n'ihi nkwenye na ha bụ nkịta egbe nwere ọgụgụ isi.
Ozi nkpuru ọbara Dog Blood Dound & Njirimara
Bloodhound bụ ụdị oge ochie, mmalite ha edoghịkwa anya. Otú ọ dị, na narị afọ nke 7, St. Hubert (onye nchebe nke dinta) na ndị mọnk ya nwere aka dị ukwuu n'ịzụlite ụdị ahụ. Bloodhound taa ka edenyere aha na FCI dị ka chiens du St. Hubert. Aha 'Bloodhound' sitere n'okwu a 'ọbara ọbara,' nke pụtara ... Gụkwuo
Blue Nose Pitbull: Ihe Need Kwesịrị Knowmara Banyere 'Nkịta Ndị Mmadụ'
Na-achọsi ike banyere Blue Nose Pitbull? Nọgidenụ na-agụ ma anyị ga-enyere gị aka ịmatakwu ihe Blue Nose Pitbulls dị n'ezie!
Boerboels: bredị a ọ na-eme ihe ike ike ka ọ bụrụ nkịta ezinụlọ?
Agburu nke nkịta Molosser, Boerboel ma ọ bụ South Africa Mastiff bụ ụdị obi ike nke na-agaghị ala azụ iji chebe gị na ezinụlọ gị.
The Border Collie - Ihe ị ga-atụ anya na ụdị nkịta a
Njirimara pụtara ìhè nke Border Collies bụ ọchịchọ ha ịrụ ọrụ karịa ihe ndị ọzọ niile. Ha na-azụ atụrụ ma na-ewedata isi ha, na-eleru atụrụ anya nke ọma. Ha na-ahụ ọ bụla anụ ụlọ na-agagharị, ha na-emeghachikwa site n'ịkpagharị, mgbe ụfọdụ ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịghọta ha, iji wee rie ma ọ bụ gbochie ya. Movement of both ... Gụkwuo
Bụ Border Collie Australian Shepherd mix bụ otu n'ime nkịta zuru oke?
Ndị nkịta na-azụ anụ bụ canines ndị pụtara ìhè, mana ọ bụrụ na ịnwere ike ijikọ ụdị azụ abụọ na-arụsi ọrụ ike? Izute Oke-ala Collie Australian Shepherd mix AKA Border Aussie.
The Shollie: Ihe niile gbasara ókè Collie German Shepherd Mix
Border Collie German Shepherd Mix bụ nnukwu ike ọkụ zuru oke zuru oke maka ezinụlọ na-arụ ọrụ. Chọpụta ihe na-eme Shollie nnukwu anụ ụlọ.
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Border Collie-Lab Mix
Na ijikọta ọgụgụ isi nke Border Collie na nwa-enyi na enyi Labrador Retriever, ị ga-enwetakwa onye na-arụsi ọrụ ike Border Collie Lab mix AKA Borador!
The Blue Heeler Border Collie mix: Ihe niile ịchọrọ ịma
Chọrọ ịzụlite nkịta siri ike, nwee ọgụgụ isi, ma dịkwa egwu? Elepụla anya n'ihu, iwebata ngwakọta Border Collie Blue Heeler. Gụọ ebe a ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nkịta a dị ịtụnanya.
A na-ahụkarị Boston Terrier dị obere ma bụrụ muscular n'ụwa niile. Nọgide na-agụ akwụkwọ iji chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nwa ada a.
Bordoodles bụ ezigbo nkịta, mana ọ bụ egwuregwu kwesịrị gị?
Y’oburu n’masi nkita kachasi nma na uwa na nke kachasi nma n’ile ya na ndi ntutu gi dika ndi enyi gi, wee nweta ihe ndi Border Collie Poodle (AKA Bordoodle).
Ihe mere Boston Terrier Pug mix ga-eji mee gi obi uto
Na-eche ma Boston Terrier Pug mix (AKA Bugg) bụ ezigbo anụ ụlọ maka gị? Ntuziaka ntuziaka a ga - enyere gị aka ikpebi ma nkịta a ọ ga - adị mma.
Ihe niile I Kwesịrị tomara Banyere Onye Oku Mmụọ Nsọ
N'agbanyeghi na ha di mpako ma na-echegbu onwe ha, ndi ọkpọ na-adi nma, nwee ume, na-eche nche, ma na-enwe obi uto.
Gịnị bụ Boggle Dog: Anya n'ime Ngwakọta Ngwakọta Ube
Ngwakọta Beagle Boxer bụ nkịta na-ahụ n'anya na-enwe ume ịchekwa. Gụkwuo banyere nke a crossbreed na ihe kpatara ya ji bụrụ nke zuru oke maka ezinụlọ na-arụ ọrụ.
Bulloxer: Gịnị bụ Boxer Bulldog mix nkịta?
Bredị na-emegbu mmadụ ọ bụla nwere njirimara ha pụrụ iche, mana gịnị ma ọ bụrụ na anyị gafere ha ọnụ? Ọ ga-amasị anyị ka ị zute Boxer Bulldog mix (AKA Bulloxer).
Chọpụta ihe kpatara Boxerdoodles ji bụrụ ndị na-ahụ n'anya ma na-eguzosi ike n'ihe
Ndi Boxerdoodle bu ezigbo Doodle diri gi? Chọpụta ihe gbasara ọkpọ Poodle Boxer, yana ihe ọ ga - adị ka nke a.
kedu ihe bụ brindle pitbull
bichon frize eze charles spaniel mix
ụzọ kwesịrị ekwesị iji yikwasị ihe nkịta
German onye ọzụzụ atụrụ German rottweiler mix